အထိတ်တလန့်ဖြစ်ခြင်းအတွက် ရှေးဦးကုသမှု | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
1. ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရထားခြင်းရှိမရှိ၊ အသက်ရှူ မရှူ ကြည့်ပါ။
2. အသက်ကောင်းစွာရှူနေပြီး ဒဏ်ရာရထားခြင်းမရှိပါက ထိတ်လန့်နေသူကို စိတ်တည်ငြိမ်အောင် ထားပါ။
- ထိတ်လန့်မှုများခဏအတွင်းပြေပျောက်သွားမယ့်အကြောင်းပြောပြီး နှစ်သိမ့်ပါ။
- အသက်ကိုဖြေးဖြေးမှန်မှန်ရှူသွင်းဖို့ သတိပေးပါ။
- အကယ်၍စိတ်ငြိမ်အောင်စွမ်းဆောင်မှုမပေးနိုင်ပါက နီးစပ်ရာဆေးခန်းသို့ အမြန်ဆုံးခေါ်ဆောင်သွားပါ။
3. သတိကောင်းစွာမရှိသူဖြစ်ပါက ရေလုံးဝမတိုက်ပါနှင့်။
4. ထိတ်လန့်သွားခြင်းကြောင့် ရုတ်တရက် သွေးပေါင်ကျပြီး ခြေဖျားလက်ဖျားများအေးစက်ကာ သတိလစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ထိုသူကို နွေးနွေးထွေးထွေးထားပါ။
အရေးပေါ်ကိစ္စ အထွေအထူးမရှိဘဲ မကြာခဏထိတ်လန့်နေပါက ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များ နဲ့ သေချာပြသသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်ပါကဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောအထူးကုဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အပူရှပ်ခြင်းအတွက် ရှေးဦးကုသမှု (Heatstroke)
၂၅.၉.၂၀၁၅ | အရေးပေါ်ကုသနည်းများ
၁။ အောက်ပါအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာပါက လူနာကို ဆေးရုံသို့အမြန်ခေါ်ဆောင်သွားပါ။
- ကိုယ်အပူချိန် 103ºF အထက်ရှိခြင်း
Stye (မျက်စိစွံခြင်း) အတွက် ရှေးဦးကုသမှု
မျက်လုံးပေါ်သို့ ရေကြက်သီးနွေးဖြင့်စိမ်ထားသော အ၀တ်စသန့်သန့်ဖြင့်ကပ်ပေးပါ။ တစ်ခါကပ်လျှင် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်ထိကပ်နိုင်ပြီးတစ်နေ့အတွင်း ကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။